Mayelana NATHI - Protech International Group Co., Ltd.
Thuthukisa Ukubumbana Kwenkampani Futhi Yakha Amasiko Wenkampani Yenkampani. Isifinyezo Sokubonga, Ukuncoma Kwokuphela konyaka, Futhi Cabanga Ngekusasa!
IProtech International Group Co, Ltd. kuthatha imikhiqizo ye-smart hardware njengomgogodla, kufaka phakathi iziqaphi zemvelo zasendlini nezangaphandle, izinsimbi ezihlakaniphile namamitha, namapulatifomu wokuxhuma amafu, asetshenziswa ngokulandelana ekuhlolweni kwe-elekthronikhi nogesi, ukuqapha imvelo yasendlini nangaphandle, ukuqapha izimpawu zezempilo neminye imikhakha. Ungumhlinzeki wezixazululo ngokuphelele. Imikhiqizo ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-100 kanye nezifunda ezifana ne-Europe, iMelika kanye ne-Southeast Asia. Abalingani abakhulu bamazwe omhlaba nguLoyoy Merlin, Foucault neminye imikhiqizo yamazwe omhlaba, kanti iChina ibambisana noXiaomi, Huawei namanye amapulatifomu.
IProtech International Group Co, Ltd inehhovisi elihlanganisiwe nefektri, ehlanganisa indawo engamamitha-skwele ayi-1,500. Itholakala esifundeni saseNanshan, eShenzhen, esifundazweni saseGuangdong, endaweni esemqoka yeShenzhen. Ingakwazi ukuxhuma amakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngesikhashana nje. Kuthatha kuphela imizuzu engama-40 ukuthi amakhasimende afinyelele ekhelini lenkampani kusuka esikhumulweni sezindiza.
Umnyango we-R & D
I-Protech International Group Co, Ltd ithatha imikhiqizo yehadiwe smart njengomgogodla, kufaka phakathi izingqapheli zemvelo zasendlini nangaphandle, izinsimbi ezihlakaniphile namamitha, namapulatifomu wokuxhuma amafu, asetshenziswa ngokulandelana ekuhlolweni kwe-elekthronikhi kanye nogesi, ukuqapha kwendalo nangaphandle kwekhaya, ukuqapha izimpawu zezempilo neminye imikhakha. Ungumhlinzeki wezixazululo ngokuphelele. Imikhiqizo ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-100 kanye nezifunda ezifana ne-Europe, iMelika kanye ne-Southeast Asia. Abalingani abakhulu bamazwe omhlaba nguLoyoy Merlin, Foucault neminye imikhiqizo yamazwe omhlaba, kanti iChina ibambisana noXiaomi, Huawei namanye amapulatifomu.